Jolay 2012 : Nitsahatra ny Free FM -
AccueilRaharaham-pirenenaJolay 2012 : Nitsahatra ny Free FM
« Pour la sécurité de ses employés et du matériel, Free FM a décidé d’interrompre ses émissions (…) Nous assumons la responsabilité de cette décision ». Io no nambaran’i Lalatiana Rakotondrazafy, tao amin’ny pejy Facebook ny harivan’ny 22 Jolay 2012.
Feno enin-taona tamin’ny 22 Jolay lasa teo ny daty nampitsaharan’i Lalatiana Rakotondrazafy ny fandaharana tao amin’ny Free FM, taorian’ny tetika fanafihana sy famotehana izany onjampeo izany avy tamin’i Andry Rajoelina sy ny mpitondra HAT.
Nifanandrify tamin’ny fikomiana tao amin’ny toby miaramila RFI Ivato io fanapahan-kevitra noraisin’i Lalatiana Rakotondrazafy io. Namoaka ny fanambarana nataon’ireo miaramila nioko mantsy ny onjampeo Free FM tamin’izany fotoana ka avy hatrany dia nanome baiko mifanandrify tamin’izany ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina.
Tsy nitazam-potsiny manoloana ny zava-nitranga kosa ny Reporters sans frontières, fa avy hatrany dia namoaka fanambarana niangavy ny mpitondra Tetezamita sy ny Free FM mba hitady vahaolana manoloana ny fifandonana. Nambaran’ny Reporters sans frontières tamin’izany fa ny onjampeo Free FM no hany radio mamoaka ny feon’ny fanoherana.
Nampitsahatra ny fandaharany araka ny efa nambara tetsy ambony ny onjampeo Free FM ny datin’ny 22 jolay 2012, taorian’ny raharaha RFI Ivato. Ankoatra ny fandrahonana azon’ny mpiasa tao amin’ity radio ity mantsy dia efa nivoaka ihany koa ny didy fisamborana an’i Lalatiana sy Fidèle, ary efa nokarohan’ny mpitandro filaminana nandritra ny telo volana izy ireo. Tahaka izao ny fanambarana nataon’ny minisitry ny Fitsarana tamin’izany andro, Christine Razanamahasoa tamin’ny teny vahiny: “« Le mandat d’arrêt contre les deux animateurs (de la radio Free FM) doit être exécuté parce que c’est la décision de la justice ».
Namoaka fanambarana nampahafantatra ny toerana misy azy i Lalatiana sy Fidèle ny datin’ny 1 Oktobra 2012 sady nanazava ny antony nampitsaharana ny fandaharana tao amin’ny Free FM. Tsiahivina fa nandrasan’ny DST teo amin’ny vavahadin’ny ambasadin’i Afrika Atsimo etsy Ankorondrano mihitsy izy ireo tamin’izany, fihetsika nomelohan’izao tontolo izao amina faritra manana ny sata manokana azy. Tahaka ny tsy nisy avokoa izany rehetra izany ankehitriny, saingy ny tantara dia mipetraka hatrany ary tsy azo fafana.